China Iikhrayoni mveliso kunye nabenzi | SJJ
I-Pretty Shiny ibonelela ngeendlela ezahlukeneyo zokubhala zesikolo, izinto zokubhala zeofisi kubandakanya iikhrayoni. Iikhrayoni ziyafumaneka kuluhlu lwamaxabiso kwaye kulula ukusebenzisana nazo. Iikhrayoni aziyityhefu kwaye ziyafumaneka kwimibala eyahlukeneyo. Iziphumo ezikumgangatho ophezulu zenza ukuba zilungele ngokukodwa ukufundisa abantwana abancinci ukuba bazobe ukongeza ekusetyenzisweni ngokubanzi ngumfundi kunye negcisa lobungcali. Esi sipho sonyuselo lwexabiso eliphantsi silungile kwisipho ngexesha leminyhadala yoluntu, ukuthengisa, isikhumbuzo sesikolo, kunye neminyhadala yesikolo.
I-Pretty Shiny ibonelela ngeendlela ezahlukeneyo zokubhala zesikolo, izinto zokubhala zeofisi kubandakanya iikhrayoni. Iikhrayoni ziyafumaneka kuluhlu lwamaxabiso kwaye kulula ukusebenzisana nazo. Iikhrayoniazinetyhefu kwaye ziyafumaneka kwimibala eyahlukeneyo. Iziphumo ezikumgangatho ophezulu zenza ukuba zilungele ngokukodwa ukufundisa abantwana abancinci ukuba bazobe ukongeza ekusetyenzisweni ngokubanzi ngumfundi kunye negcisa lobungcali. Esi sipho sonyuselo lwexabiso eliphantsi silungile kwisipho ngexesha leminyhadala yoluntu, ukuthengisa, isikhumbuzo sesikolo, kunye neminyhadala yesikolo.
Eli iya kuba lithuba elihle lokukhuthaza ishishini lakho ngokwenza igama lakho lenkampani okanye ilogo kwimveliso. Nxibelelana nathi ngeenkonzo zoyilo zasimahla.
Kulula ukufaka umbala, ukhuselekile kwaye awunatyhefu
Intlawulo yasimahla yeMold yeeYilo ezikhoyo
Iimilo ezahlukileyo, ubukhulu kunye nemibala ekhoyo
Ukhetho olubanzi lwePakeji yeNoveli
Igqibelele i-ofisi, umfundi, ukunyuselwa okanye ulungelelwaniso lwamanye amazwe
Egqithileyo Iipeni zeBhola Point
iikhrayoni ezingezizo ityhefu